China nkedo ígwè na-acha anụnụ anụnụ na ndị na-emepụta ihe na-acha anụnụ anụnụ | Womho
igba ironenameled trivets-acha anụnụ anụnụ na agba
BCT09: 20 * 20CM
Uzo nke ihe igwe eji eme ite di oke warara, nihi na ite ahu choro ezigbo ikpo oku na ogwugwu kemikal, ma o bughi uto nri gha agbanwe. Otutu ọla nwere ezigbo ihe gbasara ikpo oku, ma ha adighi ike iji ya na nhazi nri. Mana mgbe ụfọdụ, enwere ike iji ihe igwe anaghị akwụsi ike were ite ahụ wee were ihe mkpuchi nke ebe ndị ọzọ fụchie ya.
Igba ígwè casserole na-eji nkedo ígwè, nke a na-eji na-eme casseroles, na ọ dị nnọọ ka roaster na dutch oven, Nkedo ígwè nwere ike na-enye ọbụna kpo oku, na ya nwekwara ike idi nnọọ elu okpomọkụ, na-eme igba ígwè cookware ezigbo maka searing. anyị nkedo ígwè cookware e seasoned na akwukwo nri mmanụ, poselin Enamel, na ndị ọzọ na ihe onwunwe iji chebe nchara-emepe emepe, na nwere ike ime ka ọ na-abụghị osisi, otú anyị cookware bụ nnọọ ịtụkwasị obi mgbe eji maka ụtọ nri, ma ọ bụrụ na ị na-eji anyị cookware, ị ga-ahụ ka ndụ anyị maa mma.
Nhicha gị Enamel Nkedo Iron
Kwe ka osi nri na-ajụ oyi tupu ịsaa ya.
Jiri aka gị saa mmiri aka iji wee chekwaa ngwa eji esi nri nke ọma. Kpoo cookware ahụ ozugbo.
Jiri naanị plastik ma ọ bụ nylon skir pad iji zere imebi enamel.
Maka stains na-adịgide adịgide, gbanye n'ime ime efere iji 2 ruo 3 awa
Iji wepu ihe ọ bụla esi nri nri fọdụrụnụ, sie ngwakọta nke 1 iko mmiri na 2 ngaji mmiri soda na cookware.
Egbula n'akụkụ ala mkpuchi ahụ na ite ahụ, nke ahụ pụtara na mkpuchi enamel enweghị ike imetụ ibe ha aka, nke ahụ ga-ebute ọkọ n'elu.
Tupu isi nri, tinye mmanụ ihe oriri na elu nke pan wee sie nwayọ nwayọ.
Maka ọtụtụ ngwa nri, ọnọdụ dị ala ruo ọkara zuru ezu.
Cheta: na-ejikarị ogwe aka iji gbochie ọkụ mgbe ị na-ewepu arịa nri na oven ma ọ bụ stovu
U mgbe isi nri, hichaa pan ahụ na ahịhịa nylon ma ọ bụ ogbo na mmiri ncha dị ọkụ. Ejila ihe na-esi ike na ihe abras. (zere itinye ite dị ọkụ na mmiri oyi. shockjọ na-ekpo ọkụ nwere ike ịpụta, na-ebute mgba ma ọ bụ gbawara ọla).
A ga-akpọnwụ akwa ahụ ozugbo ma tinye mmanụ dị mkpa na pan mgbe ọ na-ekpo ọkụ.
Na-echekwa na jụụ na nkụ.
igba ígwè preseasoned skillet wIth osisi ahụ
igba ígwè gburugburu -acha anụnụ anụnụ enameled skillet